Golaha Shacabka oo kulankii ka baaqday Sabtidii maanta yeelanaya – Kalfadhi
Kulankii 9-aad, Kalfadhiga 5-aad, ee Xildhibaannada Golaha Shacabka ayaa maanta ka furmaya Xarunta Golaha ee magaalada Muqdisho. Sida ay Kalfadhi ogaatay, waxaa Xildhibaannada loo diray fariin loogu sheegayo inuu maanta jiro kulan. Laakiin, lama ogaan inta uu ka kooban yahay ajandaha kulanka golaha ee maanta horyaala xildhibaannada
Kulankan, oo baaqday Sabtidii, ayaa maalinkaas waxaa, haddii uu furmi lahaa, looga hadli lahaa Hindise Sharciyeedka Shirkadaha Ganacsiga. Lama hubo, laakiin waxaa la rumeysan yahay in ajandaha kulanka golaha ee maanta ay ku jirto wali ka doodista hindise sharciyeedkaas.
Waxaase walaac taagan ah in ay suurtagl noqon karto inuu haddana maanta markale u baaqdo kulankan Kooram la’aan, taas oo ah caado ku soo noqnoqotay Golaha Shacabka. Haddii ay dhacdo inuu baaqdo kulanna waxay noqoneysa markii 8-aad oo uu baaqdo kulan uu yeelan lahaa Golaha Shacabka.
Dad badan, oo ay Xildhibaanno ka mid yihiin, ayaa u arka in Kalfadhigaan 5-aad, oo furmay 27-ka bishii hore, ay halis ku tahay shaqadii lagu qaban lahaa in wax ka yar bil ay baaqdaan kulamo intaas gaaraya. Haddii ay sidaas sii socoto, waxay suuragal noqon kara iney kulamada golaha ee fashilmaya ay Kalfadhigaan ka bataan kii ka horeeyey, oo ay 16 kulan ka baaqdeen.
Wasaaradda iyo Guddiyada Dastuurka oo dadweynaha ka qeyb-gelinaya dib-u-eegista dastuurka